Jijjiirraan imaammataa biyyattii guddittii addunyaa keessatti tahaa jiru – Kichuu
HomeAfaan OromooJijjiirraan imaammataa biyyattii guddittii addunyaa keessatti tahaa jiru
Waan nu miidhus waan nu fayyadus numa qabaata. Miidhaan nutti fide maal akka tahe namuu quba qaba waan taheef sanirraa dubbachuu nan barbaachisu. Dantaa jijjiirraa imaammataa kana keessaa argannu keessaa waan tokko qofa ammaaf haa laallu. Warra mi’aa biyya ofii dagatee biyyuma ambaa ho’ifatee hafeef bilbila dammaqsaa guddaa dhageessisaa jira. Warra qabsoo mirga abbaa biyyummaa kana sababa adda addaatiin hifatee manatti galeef furmaanni jirtu takkittiin jabaatanii biyya ofii ganamaa san irratti abbaa tahuu malee wabiin akka hin jirre sagalee guddaadhaan itti himaa jira.
Biyya ofii irratti abbaa tahuuf caalaa walitti dhufanii maryachuu, wal danda’anii waliin qabsaayuu, dhaaba siyaasaa kallacha namaa tahee qabsoo hogganu qarachuu, qabeenya ofii osoo qusanne kaayyoo qabsoo biyya abbaa biyyummaatiif gumaachuu akka qabnu nutti lallabaa jira. Akkasumas warri amantii jala goree qabsoo mirga abbaa biyyummaa tana akka ‘siyaasaa’tti lagatee keessaa galeefis dhaamsa garaadhaa hin badne itti ergaa jira. Amantii ofii bilisa tahanii hordofuuf bakki wabii qabdu biyya dhaloota ofii qofa tahuu itti himaa jira.
Kanaafuu biyya ofii kan irree diinaa jala jiru diina jalaa baafatanii abbaa itti tahanii bilisummaa waaraa argachuun barbaachisaa tahuu isaa warra dagatee dantaa biyya namaatiin dagame dammaqasani ija banachisuuf faayidaa qaba. Kun hundumtuu garuu yoo warri dursee dammaqe irratti hojjetee fi haala mijeesse qofa milkaaha.
This Viking ceremony is … lit.